ခက်မာ: August 2010 1. 2.
အိပ်မက် မက်နေတာမှန်းသိသိခြင်း အပြင်မှာမိုးရွာနေတာကိုလည်း သတိထားလိုက်မိသည်။ ပြီးတော့ပြုံးမိ၏။ မြမြနှင်းက အကြီးအကျယ် အိပ်မက်မက်တတ်သူတယောက်ပင်။ အိပ်မက် မမက်ခဲ့ဘူးသောညဆိုတာမရှိဘူး ထင်သည်။ တခါတရံမှာတော့ အိပ်မက်တွေမက်နေတာကို သဘောကျသလိုလို။ အိပ်မက်ဆိုတော့လည်း အစီအစဉ်မကျရောက်ချင်သည့်နေရာတွေရောက်၍ မြင်ချင်ရာမြင်၊ ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်သွားသည်။ တခါတလေ လက်တွေ့ ဘ၀မှာ စဉ်းတောင်မစဉ်းစားမိသည့်အရာတွေ အိပ်မက်ထဲရောက်လာတတ်တော့ ထူးဆန်းပြီး သဘောကျ သလိုလိုပင်။ ဒါပေမယ့်ညစဉ်ရက်ဆက်အိပ်မက်များနှင့် နပန်းလုံးရသည့်ရက်ရှည်လာတော့ အပြင်မှာပါမောပန်း လာသည်။ အိပ်ရာထဲဝင်ဖို့ အရေး အိပ်မက်မက်မှာကိုတွေးကြောက်လာသည်။
ပြီးခဲ့သည့်ငါးရက်လောက်ကမက်သည့်အိပ်မက်ထဲမှာ ဖေဖေ့ကိုတွေ့ သည်။ ဖေဖေ့ကိုအိပ်မက်ထဲမှာ
တွေ့့ရတိုင်း မြမြနှင်းဆီမှာရှိသည့် တစ်ပုံထဲသောဓါတ်ပုံထဲကအရွယ်အတိုင်း နှစ်ဆယ်ကျော်ငါးနှစ်ပတ်လည် အရွယ်ချည်းပင်။ မျက်ခုန်းထူထူ၊ ဆံပင်ပွပွ၊ မျက်နှာသွယ်သွယ်။ ပင်ကိုယ်မျက်နှာထားတည်ပေမယ့် ပြုံးရယ် လိုက်လျှင်တော့ ပကတိပွင့်လင်းသွားသော နှစ်လိုဖွယ်မျက်နှာကိုမြင်ရမြဲပင်။ ရှိုက်သံလေးစွက်၍ အဆုံးသတ်
တတ်သောဖေဖေ့ရယ်သံတွေကလည်း အိပ်မက်တိုင်း၌ မပြောင်းလဲ။
လမ်းထိပ်က ချယ်ရီပင်ကြီး ပင်လုံးကျွတ်ပွင့်နေပုံက
ငယ်ငယ်ကတော့ ကျမတို့ တတွေ တစ်ယောက်အိမ်တစ်ယောက်ကုးသန်းလည်ပတ်ခဲ့ ကြသည်။ အလှတို့ အိမ်မှာ ဘက်ထရီအိုးနှင့်ဖွင့်သောကက်ဆက်ရှိသည့်အပြင် အလှ၏အမ မခင်ဌေးက ရန်ကုန်မှာ ကျောင်းသွားတက်သူမို့နောက်ဆုံးပေါ်သီချင်းခွေတွေ နားထောင် ရသည်။ တကယ်တော့ ကျောင်းမှာ ကျမ နှင့်ကပ်လျှက်ထိုင်သောအလှက သီချင်းခွေအသစ် ထွက် လာလျှင် အတန်းထဲမှာမိတ်ဆက်ဆိုပြထားပြီးသား။ အလှကနံမည်နှင့်လိုက်အောင် လှပြီး သီချင်းဆိုလည်း အတော်ကောင်းသည်။ အတန်းအားချိန် များတွင် ကျမ တို့ ကိုသီချင်း ဆိုပြ လေ့ရှိသည်။ သူဆိုပြသောသီချင်းများထဲမှ ကျမနားထဲစွဲ သွားသောသီချင်းဆိုလျှင် ကျမ ကဘယ်သူဆိုတာလဲ၊သီချင်းနံမည်ဘာလဲမေးတော့သည်။သူကအဆိုတော်နံမည်နှင့် သီချင်းနံမည်ကို ပြောပြ ပြီး “ငါ့အိမ်မှာလာနားထောင်ပါလား“ ဟုပြောတတ်သည်။ စနေ တနဂ်နွေကျောင်းပိတ်ရက်တွေဆို ကျမက သူတို့ အိမ်အလည်သွားကာ သီချင်းနားထောင် တတ်သလိုနေ့ လည်မုန့် စားဆင်းချိန်တွေမှာ အလှနှင့်လိုက်၍ မကြာခဏထမင်းစားဖူးသည်။ အလှတို့ အိမ်က ချမ်းသာတော့ အမြဲလိုလိုဟင်းကာင်း ချက်သည်လေ။
မ ။ ညဉ့်နက်သန်းကောင်ကြီးမှာ
ကျား ။ ဟုတ်တယ်။
မင်းကမ္ဘာမှာ လမင်းတစင်းဝင်းပသွားသလို
အေးမြတဲ့အလင်းအင်အားနဲ့ခရီးသွားနိုင်တယ်။
မ။ အေးမြတဲ့အလင်းနဲ့ ခရီးသွားရခြင်းက
ပင်ပန်းမှုတွေကို လျော့ကျပြီး ခရီးတွင်စေတဲ့အတွက်
အဲ့ဒီခရီးစဉ်မှာ ကျမတစ်ယောက်ထဲ မဖြစ်သင့်ဘူး။
ငါကတော့ မင်းရဲ့ အပါးမှာ၊ ဖ၀ါးခြေရာထပ်ရှိပါ့မယ်။
မ။ ကျမတို့ တတွေ.. စိတ်တူသူခြင်းစုဝေးပြီး
ညည်းညူသံ တစ်စုံတရာကြားရတဲ့ဆီ ဦးတည်ပြီးသွားကြမယ်။
ကျား။ လိုအပ်ချက်ရှိသူတွေရှိရာ ရောက်ပြီဆိုရင်တော့
ငါတို့ရဲ့ နှုတ်ခမ်းတွေနဲ့ 
လရောင်ဖြန်းတဲ့ အေးချမ်းမှုမျိူး သူတို့ကိုခံစားရစေမယ်။
မ။ ကျမတို့့ရဲ့ အပြုံးတွေ၊ စကားလုံးတွေကသာ
မိုးသောက်မှ နေ၀င်သည့်တိုင် ပြုံးလို့
ကျား။ ငါတို့ရဲ့လက်တွေကို သူတို့လက်တွေနဲ့ ပေါင်းယှက်ထားလို့
သူတို့ရှေ့ဆက်ရမယ့်ခရီးမှာ၊ ယာဉ်ရထားပမာ အသုံးဝင်စေမယ်။
မ။ ကျမတို့ဆီမှာ ရှိတဲ့ အစားအစာတ၀က်ဟာ
တဦးကို တဦး ကိုယ်ချင်းစာစိတ်နဲ့
ကောက်နှံစပါးတချို့ ကိုလည်း သယ်ဆောင်သွားစို့ရဲ။့
သူတို့ရဲ့စူး၊ ဆောက်၊ ဂေါ်ပြားနဲ့မျိုးစေ့များ ပေါင်းဆုံတဲ့အခါ
ကျား။ အေးမြမှုအင်အားတွေဖြာကျလာစေမယ့် အနမ်းလတစ်စင်းကို
(ဇူလိုင် ၂၂၊ ၂၀၁၀)